Mihatakataka Amin’ilay Mpiantsehatra Mafana Fo Ara-politika Ny Tele Koreana Tatsimo · Global Voices teny Malagasy
Mihatakataka Amin'ilay Mpiantsehatra Mafana Fo Ara-politika Ny Tele Koreana Tatsimo	Voadika ny 14 Janoary 2013 23:44 GMT
Zarao: Nilaza ny mpiantsehatra iray anisan'ny be tabataba indrindra ao Korea Atsimo fa nanafoana ny fisehoany amin'ny fahitalavitra ny orinasam-pifandraisana roa taorian'ny nanohanany miharihary kandidà iray resy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo.
Kim Yeo-jin, mpiantsehatra malaza ho manana fijery liam-pivoarana sy mpandray anjara mavitrika amin'ny resaka politika (@yohjini) no namoaka [ko] tao amin'ny Twitter tamin'ny 3 Janoary 2013 fa orinasam-pahitalavitra roa efa namandrika azy hanao fisehoana [fandaharana] no nanafoana tampoka ny fivoahany amin'ny fahitalavitra noho ny fironana politika. mandray anjara mavitrika amin'ny hetsi-panoherana izy ary nanohana an'i Moon Jae-in, kandidàn'ny fironana havia izay resy tamin'ny fifidianana.
Ry lehiben'ny fantsina mpampiely feo sy sary rehetra. Tsara kokoa raha lazainareo amin'ny olona ny fitsipika anatiny hisorohana izay mpanohana an'i Moon tsy hiseho tele. Efa nisy Mpamokatra sy mpanatontosa namandrika ahy hanao fampisehoana, saingy niantso ahy taty aoriana hilaza hoe “Miala tsiny aho. Tsy azo atao ilay izy”
Nahatratra in-1500 ny fampitan-tsioka hatreo, niteraka tsikera mavaivay ho an'ireo fantsona fampieleza-peo sy/na sary avy amin'ny olona. Ho an'ny mpanara-maso maro dia manamafy indray ny tsiambaratelon'ny fitsipika anatiny mifehy ireo fantsona fampieleza-peo sy sary manao izay tsy hisehoan'ny vitsy an'isa ara-politika na mpitsikera mpanao politika manana ny ambaindainy indray izao toe-javatra izao.
Raha misy ireo misalasala fa mety ho kisendrasendra fotsiny izao fandavana ny tsy hisehoany amin'ny fahitalavitra izao dia nanazava [ko] i Kim:
Nataon-dry zareo mazava tsara io. Efa tratran'izany imbetsaka aho taloha fa sambany ity no nolazaina manokana ny antony. Nilazana aho “hatramin'ny nifandraisanao tamin'ny fanentanan'i Moon, dia tsy afaka (miseho ho hitan'ny besinimaro) ianao. Miala tsiny aho”.
Nanampy tamin'ny tarehy ratsy [ko] i Kim ‘Efa nanahy ny hitrangan'izao aho’.
Kim Yeo-jin tao amin'ny Fivorian'ny ThinkCafe [Eritreritra kafe?], sary navoakan'ny mpisera Flickr ThinkCafe (CC BY-NC-SA 2.0)Nanaraka izany ny hatezeran'ny mpiserasera amin'ny aterineto. @shsh7600 naneho hevitra tamim-paharomotana [ko] :
Raha marina izany dia fanitsakitsahana miharihary ny zon'olombelona ary karazana fanasaziana noho ny safidy politika. Tokony hotsenain'ny fanoheram-bahoaka izao fanao mitratrevatreva izao ary mila mizaka ny vokany (ireo mpanatanteraka izany).
Mitaraina i MichaelPeach [ko]:
Tsy manana fahafaha-manao, tsy manan-jò, tsy manam-pahefana hanasitranana azy ireo amin'ny fironana politika ny fantsom-pampielezam-peo sy sary eto amin'ny firenena. Rehefa nahare ny vaovao momba ny fanafoanana ny fisehoan'i Kim Yeo-jin’ tamin'ny tele aho dia mahatsiaro ireo fandaharana tele mpampiala vola natsahatra tampoka, vantany vao nanomboka niasa ny fitondrana ankehitriny. Manomboka hatreo isika mahita fahavakisana politika. [Raha] misy mpiantsehatra mitsikera governemanta, mananjò hiteny izay inoany ireo fantsona fahitalavitra– terena ry zareo handao ny tele rehefa hita ho ‘mpanohana Koreana Tavaratra, komonista kavia’
Mandresy lahatra [ko] ny mpanohitra izany fomba fijery izany, tahaka an'i @pyein2 fa ny fanafohana ny fisehoana tele dia mety ho vokatry ny tsy fahombiazan'i Kim mamokatra sarimihetsika mahasarika olona maro dia maro, sy ny fikendreny halaza amin'ny alalan'ny fahazotoana ara-politika mihoatra noho ny filalaovana an-tsehatra. Saingy navoitran'ny [ko] bilaogera iray fa tsy mbola mahàla ny tsiny izany:
Afa-niteny izay olona milaza ny tenany ho ‘mpandala ny mahazatra tia tanindrazana’ na ny ‘(tena) mpandala ny mahazatra’ . Ka ahoana moa? Satria misy olona mijoro amin'ny foto-kevitra hafa, satria io olona io mijoro ery andaniny [mifanohitra aminao], no ahafahanao manamari-tena fa mety mampidi-doza ny fomba fiainan-dry zareo? Ahoana no hanamarinana izany? […] Tsy te-handoa saram-pijerena fahitalavitra intsony aho.
Gazety ao an-toerana iray no mino fa [ko] na dia tsy misy lisitra mainty voasoratra an-taratasy aza, dia afa-milaza an-kolaka amin'ny mpamokatra fandaharana ny lehiben'ireo fantsona tele ireo fa tsara kokoa ny tsy mampiasa ireo mpiantsehatra manahirana na milaza mandritra ny fandaharana ataony ny fironany ara-politika .
Azia AtsinananaKorea Atsimo
Fahalalahàna mitenyFifidiananaMedia sy Fanoratan-gazetyMediam-bahoakaPolitikaZavakanto & Kolontsaina